Puyol: “Milan, suuqa waalli ayay ka dhigtay”. Raul: “La yaabi maayo haddii ay horay ka qaadaan horyaalka” – Gool FM
Puyol: “Milan, suuqa waalli ayay ka dhigtay”. Raul: “La yaabi maayo haddii ay horay ka qaadaan horyaalka”
Raage July 29, 2017
(Madrid) 29 Luulyo 2017 – Kooxda AC Milan ayaa la isku raacay inay xagaagan wacdaro ka dhigtay suuq-xagaaga kala iibsiga, balse waxa aan la isku wada raacsanayn waa inay taasi tahay shaqo wacan oo ay qabteen Massimiliano Mirabelli iyo Marco Fassone ama inay tahay khalad dhacay in koox dhan lasoo iibiyo, waxaana haatan ka hadlay halyeeyadii Spain.
Waxaa ka hadlay Carles Puyol, daafacii hore ee Barcelona oo aan had iyo goor qarinin inuu taageere yar u yahay Rossoneri. Warsidaha La Gazzetta dello Sport ayaa kasoo weriyay sidatan: “Milan waalli ayay ka dhigtay suuqa. Deeto waqti bay qaadan doontaa inay kooxdu isla qabsato. “
Waxaa sidoo kale ka hadlay halyeeygii hore ee Real Madrid ee Raul Gonzalo Blanco, oo ah hujuum taariikhi ah isagoo yiri: “In koobab waawayn lagu guulaysto waa wax marba tillaabo u baahan. Tusaale ahaan, Champions League marka hore waa inaad soo gaartaa isaga, kaddib rubuc dhamaadka, kaddib nus-dhamaadka, kadib…. Balse la yaabi maato haddii ay Milan horay kaga guulaysato horyaalka Talyaanig”.
”Eeh Juve: waa naadi wayn oo 2 final oo CL ah yimid 3-dii sanee ugu dambeeyay. Dhibaatadu waa inay hor istaageen Super Barça kaddibna Super Madrid. Waa uun intaas”. ayuu raaciyay Raul.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Arsenal vs Benfica 5-2 (Gunners oo si xun u garaacday Benfica)